अख्तियार प्रमुख बनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिदै राईले भनेः क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार र ललिता निवासको फाइल खोल्छु! – PathivaraOnline
Home > समाचार > अख्तियार प्रमुख बनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिदै राईले भनेः क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार र ललिता निवासको फाइल खोल्छु!
admin December 21, 2020 समाचार	0
काठमाण्डाैं । पूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिश भएको खुलेको छ । अख्तियार प्रमुख बनाएकोमा प्रधानमन्त्रीलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिदैँ राईले भनेः ‘मेरो पहिलो काम प्रचण्डको क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार र माधव नेपालको ललिता निवासको फाइल खोल्ने’ कुराकाे खुलाशा ट्विट मार्फत गरिसकेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै जोडिएको प्रचण्ड-माधव योजना फेल खाएकाे छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुचाएका पूर्व सचिव राइको अख्तियारमा प्रवेशले राजनीतिक र प्रशासनिकवृत्तमा तरंग ल्याएको छ । राईको नाम सिफारिश भएलगत्तै उनको नाममा एउटा एकाउन्टबाट कठोर कदम चाल्नेसहितका ट्वीटहरु धमाधम गरिएका छन् । जसमध्ये पहिलो ट्वीटमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न खुट्टा काप्ने छैन भनिएको छ ।
त्यसपछि आफ्नो पहिलो काम क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको फाइल र ललितानिवासको फाइल खोल्ने हुने उल्लेख छ । तयसपछि खानेपानी मन्त्रालयमा चरम भ्रष्टाचार भएको ट्वीट गरिएको छ । तर, जानकारीमा आएसम्म यो ट्वीटर एकाउन्ट प्रेमकुमार राईको आफ्नै होइन । यो कसैले बनाएर प्रयोग गरिरहेको छ ।
अनलाइनमार्गबाट साभार ।
बहराइनमा रहेका अवैध नेपालीहरूका लागि आयो यस्तो खबर!